စက်ဘီးအကောက် Appsapk အပေါ်ကျွမ်းကျင် | APK ကို Android အတွက် Download လုပ်သိမ်းဆည်းထား
ပင်မစာမျက်နှာ » ပျော်စရာ & ဂိမ်းများ » စက်ဘီးတန့်လှည့်ကွက်ကျွမ်းကျင် - T.kn အခမဲ့ဂိမ်းများ
စက်ဘီးတန့်လှည့်ကွက်ကျွမ်းကျင် - T.kn အခမဲ့ဂိမ်းများ APK ကို
အဆိုပါ Knights Inc ကယင်းအတိုင်းစက်ဘီးစီးပြိုင်ပွဲ၌သင်တို့ကိုကြိုဆို & ဆိုင်ကယ်တန့်အားကစားပြိုင်ပွဲ နိဒါန္း
စက်ဘီးတန့်လှည့်ကွက်ဟာ android စမတ်ဖုန်းများအတွက်ရရှိနိုင်မယ့်အခမဲ့မိုဘိုင်းဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်ကျွမ်းကျင်။ ဆိုင်ကယ်ဂိမ်းတူအောင်ဖန်တီးရန်ကိုချစ်ပြီးလိုလားတဲ့စက်ဘီးမြင်းစီးဖြစ်လာလိုသူများအတွက်ဂိမ်းကစားသူသန်းပေါင်းများစွာ join ။ သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းရီးရဲလ်ဆိုင်ကယ်တန့်ချန်ပီယံကိုစတင်ဖွင့်အကြောင်း, သင်ရုံတစ်ခုတည်းကိုထိပုတ်ပါကွာဖြစ်ကြသည်။ အခုတော့ဆိုင်ကယ်တန့်ဂိမ်းအဆင့်မြှင့်လှည်စက်ဘီးနှင့်အရူးမြင်းစီးနှင့်အတူရရှိနိုင်ပါသည်။
အဘယ်ကြောင့်များနှင့်မည်သို့စက်ဘီးစီးပြိုင်ပွဲဂိမ်း Play မှ
Woody အပုဒ်ပေါ်တန့်စက်ဘီးသင်ဤပြိုင်ကား 3d ဂိမ်းထဲမှာလှည့်ကွက်မာစတာဖြစ်များအတွက်အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းဂိမ်းသုံးစွဲသူများကပဲအခြားအ moto ဂိမ်းကဲ့သို့ထူးခြားသော position နဲ့ဆက်ဆံလုပ်ဆောင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်နေကြသည်။ သင့်ရဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်တန့်ထုပ်ထားစက်ဘီးပြိုင်ပွဲဂိမ်းစွန့်စားမှုများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ <သံခမောက်လုံးမော်တာဆိုင်ကယ် position နဲ့ဆက်ဆံ၌သင်တို့၏အနိုင်ရဆုံးဖြတ်အရေးပါသော parameter သည်ဖြစ်ပြီး, ဒီဂိမ်းရဲ့အဆုံးမှာသက်သေပြပါလိမ့်မယ်🙂> Moto ဂိမ်းများကိုစွန့်စားမှုသင့်ရဲ့ fi nger အကြံပေးချက်များအပေါ်ယခုစိတ်ထားပါ။ tutorial ကိုသင် moto Simulator ကိုဂိမ်းထဲမှာမောင်းထုတ်ရန်ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
ပြိုင်ပွဲခြုံငုံသုံးသပ်ချက် - moto အခမဲ့ဂိမ်း vs. အစစ်အမှန်မော်တော်ဆိုင်ကယ်တန့်
ကျနော်တို့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာချဉ်းကပ်ရန်လွယ်ကူသောစမ်းသပ်မှုတွေထဲကနေမျိုးစုံအဆင့်ဆင့်သယ်ဆောင်ရာကိုမှန်ကန်ပြိုင်ပွဲအခြေအနေတွေအရသိရသည်ပုဒ်ကိုပြင်ဆင်ပါတယ်။ သငျသညျမော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြိုင်ကားသမား Are ?? fi အပေါငျးတို့သစိန်ခေါ်မှုအလုပ်တခုကိုလှည့်ကွက်များနှင့် fi nish ကားမောင်းသင့်ရဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကိုသုံးသင်ရှိသည်အဘယ်အရာကိုထွက် ND ကြပါစို့။
သင့်ရဲ့လမ်းကြောင်းထဲတွင်နေရာမဆိုအခက်အခဲမရိုက်နဲ့, အရူး moto position နဲ့ဆက်ဆံလျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့်ပညာရှင်ပီသစွာ drive ကို၏အလုံအလောက်စမတ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒီမှာပါ! သင့်ရဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်လှည့်ကွက် Apply နှင့်အချိန်ပေါ်တွင်အန္တရာယ်ရှိသောအလုပ်များဖြည့်စွက်။ ကျနော်တို့ကအနည်းဆုံး5Mint အဘို့ဤဆိုင်ကယ်ဂိမ်းကစားပြီးနောက်, သငျသညျခြင်း simulation အားလုံးကိုကားတစ်စီးဂိမ်းနှင့်အခြားပစ္စည်းပစ္စယအကြောင်းကိုမေ့လျော့ကြလိမ့်မည်, သင်အလေးအနက်ပြောကြားလိုပါတယ်။ သငျသညျဆိုင်ကယ်ဂိမ်းတစ်ခုအစစ်အမှန်တန့်သည်လူဖြစ်လာဖို့အကြောင်းရှိပါသည်။
ကြယ်သုံးပွအတူအပေါငျးတို့သအဆင့်ဆင့်အပြီးသတ်နှင့်နောက်တစ်နေ့အဆင့်ဆင့်များအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီရန်သင့်အခွင့်အလမ်းပါစေ။ သငျသညျကြယ်မျိုးစိတ် fi က c အရေအတွက်ကိုရှိပါကသင်သာဖွင့်လှစ်နိုင်ပါလိမ့်မည်ကဲ့သို့သောအဆင့်ဆင့်၏အချို့ခြွင်းချက်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်အစာရှောင်ခြင်းနှင့်အလျင်မြန်ခြင်းရှိကြလော့။ အသုံးပြုသူသန်းပေါင်းများစွာရုံနဲ့အခြားဆိုင်ကယ်ဂိမ်းနဲ့တူသငျနှငျ့အတူယှဉ်ပြိုင်မှု၌ရှိကြ၏။
အကွိမျမြားစှာစက်ဘီး position နဲ့ဆက်ဆံဖျော်ဖြေဖို့မရရှိနိုင်ပါ၏ လူအပေါင်းတို့သည်စက်ဘီး (ဆုပ်ကိုင်, acceleration ကိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်) ၏အခြေစိုက်စခန်းအပေါ်ခွဲခြားထားပါသည်သူတို့ထဲကအကောင်းဆုံးကိုရွေးချယ်ပါ: အားလုံး upgrade အနည်းငယ်ဒင်္ဂါးပြားဖြုန်းနေကြတယ်။ အားလုံးမော်တော်ဆိုင်ကယ်စျေးပေါမှုနှုန်းအပေါ်ဖြစ်ကြသည်သင်သည်ထိုသူတို့အပေါ်အမှန်တကယ်ပိုက်ဆံဖြုန်းဖို့မလိုအပ်ပါဘူး, ရုံဒင်္ဂါးပြားဝင်ငွေနှင့်သုံးဖြုန်းအဆင့်ဆင့်ကစား။ သငျသညျစိတ်အားထက်သန်မှုရှိပါကဤသည်အရူးစက်ဘီး position နဲ့ဆက်ဆံကိုနောက်ကောက်ပြိုင်ပွဲချန်ပီယံသို့လှည့်ပါလိမ့်မယ်။
စာနယ်ဇင်းတိုက်မိရှောင်ရှားရန်, စာနယ်ဇင်းဘရိတ်အရှိန်မြှင့်ရန်အပြေးပြိုင်ပွဲခလုတ်, left နှင့်ညာဘက်မြှားစက်ဘီး၏မြှောင်ကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်ခလုတ်အဖြစ်ကောင်းစွာထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်ခုန်ချထားပါသည်။
** အပိုဆုလာဘ်များအတွက် FL ip နှင့် front- FL ip ကိုပြန်ယူပေးဖို့မမေ့မလြော့ပါ **
ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ - စောင်းထိန်းချုပ်မှုကိုလည်း (ဒီစက်ဘီးစီးပြိုင်ပွဲဂိမ်း၏ setting များကိုရှောင်သွားလော့, select လုပ်ပါ tilt ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်ပျော်စရာပျော်မွေ့) သည်
တွင် - ဆိုင်ကယ်ပြိုင်ကားဂိမ်းထဲမှာ App ကိုဝယ်ယူမှုနှင့်ကြော်ငြာ
သူတို့ကစက်ဘီးရဖို့အစစ်အမှန်ပိုက်ဆံဖြုန်းနိုင်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ဒင်္ဂါးပြားသုံးဖြုန်းချင်ကြပါဘူးသောသူတို့အဘို့။ ကျနော်တို့ရုံအသုံးပြုသူများကို refresh လုပ်ဖို့ကြော်ငြာများ၏ကန့်သတ်အရေအတွက်ကနေရာပါပြီ။ သငျသညျတစ်ခုတည်းဒေါ်လာစျေး၏ရိုးရှင်း In-app ကိုဝယ်ယူ availing အားဖြင့်သူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်ပါစေ! သငျသညျဂိမ်းထဲမှာ moto တူအောင်ဖန်တီးရန်စိတ်အားထက်သန်မှုရှိပါကသင့်ရဲ့စစ်မှန်သောဘဝတစ် moto မြင်းစီးသူရဲတန့်သည်လူဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်စိတ်ကိုထား:
* ပထမပရော်ဖက်ရှင်နယ်သင်တန်းများကို ယူ. , အိမ်မှာကမကြိုးစားပါ!
- ဤအတိုင်းစက်ဘီးစီးဂိမ်းကိုမဆိုကို Wi-Fi ချိတ်ဆက်မှုမလိုအပ်ပါဘူးဘယ်နေရာမှာမဆိုဒါဟာ Play ။ သင်ကမြေအောက်ရထားအတွင်း, FL ying နေစဉ် (အစစ်အမှန်) လေယာဉ်ပေါ်တွင်လမ်းပေါ်ရှိကားထဲတွင်တစ်ဦးဗိမာန်တော်၌သို့မဟုတ်ဗလီ (သို့မဟုတ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပင်သန့်စင်ခန်း :-P အတွက်) ပြိုင်ကားကိုခံစားနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအမြဲသင်သည်မည်သည့်ကုန်ကျစရိတ်မှာတုန်လှုပ်ခြင်းနှင့်ပျော်စရာပေးမယ့်, - အခမဲ့ဂိမ်းဤအခမဲ့ဂိမ်းပဲကားမောင်းစတင်ရန်ပုတ်ကစားရန်သင့်ထံမှမဆိုတစ်ခုတည်းတစ်ပြားမှမလိုအပ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့က Google play စတိုးပေါ်ရရှိနိုင်ပါကအကောင်းဆုံးတန့်ဂိမ်းရဲ့အလောင်းအစား။ - အသက်ခဲ့သည် Rating ခွင: ဆိုင်ကယ်ပြိုင်ဂိမ်းအကြမ်းဖက်မှုသို့မဟုတ်အခြားရင့်ကျက်သောအကြောင်းအရာများကိုဆံ့မထားဘူး။ ဒါဟာတစ်ရိုးရှင်းပြီးလွယ်ကူတဲ့ဆိုင်ကယ်ပြိုင်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ကစားရန်အခမဲ့, သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူမျှဝေ။
- ထိန်းချုပ်ရေး optimized
- Levels နဲ့အခက်အခဲလျော့ချ
- အနှေးပူနွေး Start ကိုပြဿနာပြေလည်
- မှီဝဲတစိတ်တပိုင်းပါတီအား Lock ကိုပြဿနာပြေလည်
နောက်ဆုံးပေါ် Update ကိုခံစားကြည့်ပါ
စက်ဘီးတန့်လှည့်ကွက်ကျွမ်းကျင် - T.kn အခမဲ့ဂိမ်းများ
44.27 ကို MB
အဆိုပါ Knights Pvt Ltd မှ